Ogaden News Agency (ONA) – Xerada IFO oo Lagu Soo Bandhigay Hidaha iyo Dhaqanka Ogadenya
Xerada IFO oo Lagu Soo Bandhigay Hidaha iyo Dhaqanka Ogadenya
Maalin nimadii Axada taariikhduna ay kubeegnayd 2/10/14 Waxaa xerada qoxootiga Ifo ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay xaflad aad ubalaadhan oo lagu maamuusayay maalinta Hidaha iyo Dhaqanka S.ogadenia. Xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen Ururka midawga ardayda iyo dhalinyarada Ogadenia OYSU ayaa ahayd mid mudooyinkii u danbeeyayba laga dhursugayay. Xaflada oo ay kasoo qaybgaleen dadwayne aad utiro badan oo isugu jira xubnaha faraca Muftaaxulxoriyo ee xerada Ifo, dhalinta OYSU ee xerada kadhisan Ururka culima-owdiinka Ururka Haweenka iyo Marti sharaf badan oo ka kala socday xeryaha Dhadhaab.
Xaflada ayaa furantay abaare 3:00 subaxnimo oo ahayd xiligii loo calaamadiyay waxaana sidii caadada ahaydba lagu furay aayado qur’aanka kariimka ah kamid ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay Gudoomiyaha dalada culimada S.Ogadenia ee Bariga Africa sheikh Maxamad Irshaad, wuxuuna sheekhu furfurasho kadib dhalintii iyo dadwaynihiiba xasuusiyay cabsida allaah isagoo aad ugu booriyay in ay dadku si dhab ah Allaah S.W uga baqaan amarkiisana uqaataa.
Intaas kadib waxaa laguda galay xafladii iyo wixii ay soo diyaariyeen Ururka OYSU faraciisa Muftaaxulxoriyo. Ugu horayna xoghayaha OYSU Ifo mudane Cabdi Carab ayaa sharaxaad ka bixiyay xafladan iyo muhiimada loo qabtay wuxuuna xusay waxyaabaha ay maanta ku soobandhigi doonaan kuwaas oo ay kamid yihiin qalabkii ay adeegsan jireen shacabka S.Ogadenia iyagoo goobta ka soobuuxiyey qalabkii Hidaha iyo Dhaqanka sida Dhiisha, Dhiilka, Masafta, Mooyaha, Maxaadhka, Mudaca, Darimaha Iyo qaybo kale oo kamid ah qalabka dhirta dabiiciga ah laga sameeyay oo looga maarmi jiray wax kasta oo ay adeegsadaan dunida inteeda kale.
Xafladan oo ay kasooqayb galeen Odayaal iyo haween waawayn ayaa si aad uqoto dheer sharaxaad uga bixiyay sidii qalabkan loosamayn jiray iyo sidii loo isticmaali jirayba xufladan oo ay fadhiyeen dhalinyaro aan waligood arag qalabkan oo lasamaynayo iyo isagoo la isticmaalayo toona ayay dhalintu kaheleen faa’iido aad ubadan oo laxudhiidha xaga dhaqanka ay ree miyaka soomaaliyeed gaarka ulahaayeen.
Dhanka kale waxaa waxaa goobta lagusoo bandhigay qaybo kamid ah ciyaara hidaha iyo dhaqanka sida Dhaantada iyo gabayada iyo waliba majaajilada waxaana xaflada kasoo qayb galay abwaano xaga dhaqanku ku xeeldheer oo ay kamid yihiin abwaan Axmad Sh Cali Heeleele iyo Abwaan Mukhtaar Sulub Cagjar oo siwaafi ah usoo bandhiga gabayo iyo sheekooyin dhaadheer oo kusaabsan dhaqanka gaarka u ah shacabka S.ogadenia.
Guntii iyo gunaanadkii xaflada ayaa kusoo gabagabowday si nabad ah waxayna soo gabagabowday abaare 12:00 duhurnimo.